Xogta Shirkadda & Dhaqanka
Warshada & Shaybaarka
Heerka Dhexdhexaadka ah ee RDP
Heerka Adag ee RDP
RDP Fasalka dabacsan
Heerka RDP Hydrophobic
Waa maxay saamaynta qadarka dheeriga ah ee hydroxypropyl methyl cellulose ee sifooyinka hoobiye?
by admin 22-01-24
Hydroxypropyl methyl cellulose HPMC waxay si weyn u wanaajin kartaa haynta biyaha ee hoobiye, iyo qiyaasta hoose ee hydroxypropyl methyl cellulose HPMC waxay si weyn u wanaajin kartaa haynta biyaha ee hoobiye.Marka nuxurku yahay 0.02%, haynta biyaha ayaa kor u kacday 83 % ilaa 88%;marka t...
Doorka budada polymer-ka ee dib loo cusboonaysiin karo ee ku jira putty, hoobiye, koolada tile
by admin 22-01-18
Budada cinjirka ee dib loo cusboonaysiin karo waxaa loo isticmaalaa budada gidaarka gudaha iyo dibadda, xabagta tile, grout tile, wakiilka budada qalalan-qallalan, hoobiye dahaarka dibadeed, hoobiye is-le'eg, hoobiye dayactirka, hoobiye qurxinta, hoobiye aan biyuhu lahayn iyo dahaarka dibadda qalalan- hoobiye isku dhafan...
Saamaynta budada cinjirka ah ee dib loo kala firdhi karo ee tayada budada suufka ah
by admin 22-01-13
Marka la eego dhibaatada in budada putty ay fududahay in la budo, ama xooggu ma aha ilaa wax.Waxaa la og yahay in ether-ka cellulose uu u baahan yahay in lagu daro si loo sameeyo budada dhejiska, derbiga dhejinta waxay isticmaalaan HPMC, iyo isticmaaleyaal badan oo aan ku darin budada cinjirka ee dib loo cusboonaysiin karo.Dad badan ayaan ku darin budada polymerka si ay u badbaadiyaan kharashaadka...
Dhab ahaantii miyaad maqashay doorka istaarijka ether ee hoobiye?
by admin 22-01-05
Starch ether waa erey guud oo loogu talagalay fasalka istaarjka la beddelay ee ay ku jiraan bonds ether ee molecule, sidoo kale loo yaqaan istaarijka etherified, kaas oo si weyn loogu isticmaalo daawada, cuntada, dharka, waraaqaha, kiimikooyinka maalinlaha ah, batroolka iyo warshadaha kale.Maanta waxaan inta badan sharaxnaa doorka istaarijka ether ee ...
Waa maxay saamaynta ay budada polymer dib loo cusboonaysiin karo ku leedahay xoogga hoobiye?
Budada polymer-ka dib loo cusboonaysiin karo waa emulsions polymer kaas oo lagu beddelay nidaam taxane ah sida heerkul sare iyo cadaadis, qalajinta buufinta iyo daawaynta dusha sare oo loo rogo walxaha xabagta kulaylka caaga ah.Marka lagu qaso biyaha, kuwan xirmooyinka organic budada ah waxay dib ugu firdhi karaan biyaha...
Waa maxay saamaynta ay leedahay ku darida biyaha celinaya ee engegan alaabta dhismaha?
by admin on 21-12-24
Budada biyaha ee Silicon waxay ku habboon tahay sibidhka isku dhafka qalalan ee kiimikooyinka dhismaha.Waxa ay siin kartaa biyo celin heersare ah oo walaxda ah, iyada oo si weyn u yaraynaysa heerka nuugista maaddooyinka, mana saameeyaan xoogga dabacsanaanta iyo xoogga isku-buuqa.Waxay wanaajin kartaa agabka anti-con...
Sidee budada polymer-ka uga ciyaartaa doorka isku-xidhka ee hoobiye sibidhka?
by admin on 21-12-15
Budada cinjirka ee dib loo cusboonaysiin karo waa walxo gelling organic ah oo inta badan la isticmaalo.Waa budo la helay iyadoo lagu buufiyo emulsion polymer ah oo leh aalkolo polyvinyl ah sida kolloid ilaalin ah.Budadani si isku mid ah ayaa loogu kala firdhi karaa biyaha ka dib marka la geliyo biyaha, samaynta emulsion.Ku darida dib loo kala diri karo...
Maxay tahay sababta loogu daro polycarboxylate superplasticizer si loogu daro hoobiyeyaasha is-beddelka ah?
by admin 21-12-08
Biyo yareeyaha aashitada polycarboxylic ee leh qaab-dhismeedka molecular ee qaabaysan shanlada ayaa leh astaamaha heerka dhimista biyaha sare, maadada hoose, luminta shubka hoose ee waqti ka dib, iyo laqabsiga wanaagsan ee sibidhka.Waxa si weyn loogu isticmaalaa daaraha dhaadheer, buundooyinka, iwm. Injineerinnimada noocan ah, th...
Waa maxay saamaynta ay budada polymer-ka dib loo cusboonaysiin karo ku leedahay xabagta tile?
Xabagta tiilada waa shey sibidh-ku-saleysan oo isku xira oo loogu talagalay dhejinta tiirarka, sidoo kale loo yaqaan xabagta tile.Waxaa loo isticmaali karaa in lagu dhejiyo dhoobada dhoobada ah, muraayadaha dhalaalaya, iyo dhagaxyada dabiiciga ah sida granite.Xabaggu wuxuu ka kooban yahay wadar ahaan, sibidhka Portland, qadar yar oo lime ah oo fuuqbaxay iyo addit shaqaynaysa...
Shuruudaha farsamada iyo dhibcaha dhismaha ee dhoobada lakabka khafiifka ah!
Madaafiicda lakabka khafiifka ah waxaa inta badan loo isticmaalaa ku dhejinta gidaarada leh fidsanaanta sare.Haddii heerka aasaasiga ah uu sarreeyo, iyo qaab-dhismeedka iyo dhismaha ayaa sidoo kale loo oggol yahay ama loo baahan yahay in la isticmaalo dhejisyo khafiif ah oo khafiif ah, ka dibna lakab khafiif ah ayaa la isticmaali karaa.Dhumucda lakabka malaasta khafiifka ah waa mid guud...
Xilligee ayaan hagaajin karin dhoobada dhoobada ah?
by admin on 21-11-18
Sababtoo ah dhoobada dhoobada ah waxay leedahay waxqabadka kulaylka qabow qabow, iyo koollada dhoobada sibidhka ku salaysan ayaa sidoo kale jira dhibaatadan oo kale, marka heerkulka ama qoyaanka isbeddelo, dhoobada dhoobada ama dhejiska dhoobada ayaa jiri kara dhacdo la qiyaasi karo iyo hoos u dhac.Markaa, haddii heerkulku hooseeyo gaar ahaan, hagaajin ilaa...
Sidee bay wax-u-qabsiga hoobiyeyaasha hore u-qaseen u wanaajiyaan waxqabadka hoobiye?
by admin on 21-11-10
Waxyaalaha lagu daro sida hoobiyeyaasha hore loo isku daray: ethers cellulose, accelerating agent, budada polymer redispersible, hawo-entraining wakiilada, wakiilada hore-xoojinta, wakiilada biyaha-yareeya, iwm, kuwaas oo u baahan in si gaar ah loogu daro sida waafaqsan isticmaalka injineernimada, si weyn hagaajinta waxqabadka ...
1234Xiga >>> Bogga 1/4
Rm3301, Dhismaha 1, No.700, Liquan Road, Degmada Putuo, Shanghai, Shiinaha
Xuquuqda daabacaadda 2021: Dhammaan xuquuqaha way xifdisan yihiin.